कोभिड–१९ का कारण जुम्लामा कैदीको मृत्यु - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ कर्णाली प्रदेश ∕ कोभिड–१९ का कारण जुम्लामा कैदीको मृत्यु
कोभिड–१९ का कारण जुम्लामा कैदीको मृत्यु
मानदत्त रावल मंगलबार, २०७८ जेठ २५ गते, १०:२७ मा प्रकाशित
जुम्ला–जुम्ला कारागारमा रहेका एक जना कैदीको कोभिड–१९ संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । तिला गाउँपालिका–१ रारालिहिका ७६ वर्षीय एक पुरुषको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. रमेश भट्टराईले दुई दिनदेखि आईसीयुमा उपचार भइरहेका कैदीको मृत्यु भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘संक्रमित जेलबाट आउनुभएको कैदी हो । दुई दिनदेखि आईसीयुमा राखेर उपचार भइरहेको थियो । सोमबार उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।‘
उनलाई १५ जेठमा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
कारागारभित्रका दुई महिला र १ सय २१ पुरुष गरी १ सय २३ जना कैदीवन्दीमध्ये १५ जना पुरुषलाई कोभिड–१९ संक्रमण देखिएको थियो । अन्य संक्रमितलाई कारागारभित्रै छुट्टै आइसोलेट गरिएको कारागार कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । कारागारभित्रै आइसोलेट गरिएका कैदीवन्दीलाई भने संक्रमणका लक्षण नदेखिएको जनाएको छ ।
‘संक्रमितसँग ठूलो रोग थिएन । तर, सामान्य दम देखिएको थियो । बचाउनको लागि हर प्रयास भएपछि बचाउन सकिएन्,’ डा. भट्टराईले भने । एक जना कैदीको मृत्युसँगै जुम्लामा कोभिड–१९ संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ जना पुगेको छ ।